Talooyin iyo tabaha si aad hadiyad gaar ah ugu sameyso lamaanahaaga | Ragga Stylish
Sida loogu doorto hadiyad gaar ah lamaanahaaga
Ragga wax ka adag ma jiro in uu hadiyad u doorto lammaanihiisa. Waxaa ka mid ah xulashooyinka badan ee jira iyo dhadhanka haweeney kasta, siinta waxa ay dhab ahaan doonayaan waa caqabad dhab ah.
Si ka duwan sanadihii hore, Maanta ninku wuu oggol yahay markay tahay in xaaskiisa la siiyo wax iyada ka yaabiya, Taasi waxay ku tusaysaa inaad ka fikirtay iyada iyo tan ugu muhiimsanba, inaad taqaanid.
Si aad uga caawiso aadanaha xulashada, tilmaamaha soo socdaa waxay noqon karaan caawinaad weyn si aad ugu wajahdo bakhaarada ruux qumman.
1 Maxay muhiim u tahay in la sameeyo hadiyadda ugu fiican?
2 Tilmaamaha maskaxda lagu hayo markaad dooranayso wax iyada u gaar ah
2.1 Baaritaan hore
2.2 Lacag sii
2.3 Ficil noqo
2.4 Sii khibrad lama ilaawaan ah
3 Maxaa khaladaad ah in laga fogaado marka la dooranayo hadiyad loogu talagalay lammaanaha
3.1 Ha siin inaad ka fikirto naftaada
3.2 Iska indha tir duruufta
3.3 Ahaansho la'aan marka aad wax gaar ah siinayso lammaanahaaga
Maxay muhiim u tahay in la sameeyo hadiyadda ugu fiican?
Marka la eego tirakoobka, haweenku waxay ka cawdaan in raggu had iyo jeer khaldan yihiin markay hadiyad u dooranayaan, inay ku adag tahay inay doortaan wax gaar ah. Hadiyad si fiican loo xushay waxay muujineysaa inay ku habboon tahay rabitaanka lamaanaha; Waa muhiim in haweeneyda la maqlo oo la fahmo, oo haddii tan loo turjumo hadiyad, intaas ayaa ka sii fiican.
Sidoo kale, waxaa jira qodobka layaabka leh. Marka taariikhaha muhiimka ah ee dabaaldegyada, maalmaha dhalashada, sannad guurada meherka, iwm ay soo dhowaadaan, haweenka badankood waxay isu diyaariyaan inay helaan hadiyad munaasabaddaas gaarka ah. Xilliga ugu sarreysa, markay furayaan waxa nin ku dadaalay inuu gaaro, guusha way dhammaystiri kartaa.
Tilmaamaha maskaxda lagu hayo markaad dooranayso wax iyada u gaar ah
Kaliya baaritaanka wanaagsan ee tan oo kale ah waxaad ku ogaan kartaa hubaal waxa lammaanuhu runtii rabaan. Ha uga tegin xulashada hadiyadda daqiiqadda ugu dambeysa; waxaa fiican inaad wakhti ku qaadato inaad ka fikirto inaad jeceshahay.
Hal dariiqo oo lagu ogaado waa fiiro gaar ah u yeelo tilmaamaha ay haweeney bixiso kahor intaan la gaarin taariikhda la filayo. Waxaa laga yaabaa inaad ka hadleyso jawaan aad ku aragtay daaqada dukaan ama waxa aad ugu baahan tahay moobil gaar ah oo aad ku shaqeyso. Kuwani "niiko" waa inaan la iska indhatirin.
Ikhtiyaar kale ayaa ah Si aad ah ugu fiirso waxa lamaanaheena ka eegay dukaamada internetka. Liiska kuwa ugu cadcad biraawsarayaasha ayaa na siin kara tilmaamo muuqda oo ah waxa ay jeclaan laheyd inay ku hesho hadiyad ahaan.
Tallaabada ugu dambeysa, su'aasha tooska ah weligeed ma guul darreysato. Dumarku dhib kuma qabaan haddii lammaanihoodu weydiiyo waxa ay jecel yihiin, maxaa yeelay taasi waxay muujineysaa xiisaha ay u qabaan qancinta rabitaankooda.
Si ilihii oo dhami way wada dhammaadeen iyo xitaa sidaa darteed si dhab ah looma garanayo waxa la bixinayo, waxa ugu fiican ayaa ah in la bixiyo lacag caddaan ah. Maaha kan ugu jacaylka badan, laakiin xaaladaha qaarkood way shaqeyn kartaa. Biilinta oo aad ku rido baqshad leh kaar aad u jecel ayaa laga yaabaa inay tahay tan ugu fudud.
Kaararka hadiyadu waa nooc casri ah oo lacag caddaan ah taas oo isla markaa ka yaabin karta lamaanaha. Noocyada moodooyinka haweenka ayaa leh qaabkan si loo siiyo wax gaar ah, leh qaddar go'an.
Haweenka qaar waxay doorbidaan walxaha, qalabka, iwm, kuwaas oo ka caawin kara inay fududeeyaan howlahooda maalinlaha ah. Waxay ku xirnaan doontaa waxa wehelkayagu ka fekero hadiyadaha noocan ah. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa inaad iska ilaalisaa inaad doorato waxa ugu badan, sida birta.
Suuqa wuxuu bixiyaa fursado badan oo leh alaabooyin cusub Mana aha qasab in ay ahaato qalab. Hadiyad weyn waxay noqon kartaa shey daryeel haween ah.
Sii khibrad lama ilaawaan ah
Markaad xiriir dheer leedihiin wax walbana aad horay u siisay, bedelka wanaagsan ayaa ah in la siiyo wax gaar ah oo labada qof ay isla qaban karaan.
Safar, dibedda, safar buuro, maalin dalxiis, riwaayad. Shaki la’aan, tani waa xalka sasabashada iyo layaabka isku mar ah.
Maxaa khaladaad ah in laga fogaado marka la dooranayo hadiyad loogu talagalay lammaanaha
Ha siin inaad ka fikirto naftaada
Khaladka guud ee ragga sameeyaa waa hadiyado ku saleysan dhadhan shaqsiyeed. Dumarku waxay dareemayaan in qaabkan lammaanuhu isku dayayaan inay ku soo rogaan dookhooda, iyada oo hoos u dhigaysa taheeda Xaaladdan oo kale su’aasha ayaa mudan in la isweydiiyo, tani ma iyadaa nafteeda u iibsan lahayd?
Iska indha tir duruufta
La mid maaha in la bixiyo hadiyad dhalasho, sannad-guurad ama Jacayl; hadiyada waa in loo jiheeyaa hadba dhacdada. Maalmaha dhalashada marwalba way kafiican tahay in wax uun loo doorto iyada, halka sanadguurada guurka aad dooran karto wax lammaanaha loo wadaago.
Maalinta Jacaylka ayaa dalbata in laga fikiro wax gaar ah iyo jacayl.
Ahaansho la'aan marka aad wax gaar ah siinayso lammaanahaaga
Khalad kale oo lab ah oo caadi ah ayaa ku dhacaya culeysyo iyo heerar aad u sarreeya. Bouquet-ka caadiga ah ee soobaxyada ama sanduuqa shukulaatada ayaa ka baxsan moodada mana dhaqaajiyaan haween kasta, maxaa yeelay ma muujiyaan in lammaanahoodu ogyahay iyaga.
Haddii aad doorato xulashooyinkaan, maxaa yeelay fikradaha ayaa kaa dhammaaday, waa inaad ugu yaraan isku daydaa inaad asal ahaato: soo iibso ubaxyada ay doorbideyso, soo bandhigay sida aad u jeceshahay, hel macmacaannadaas oo ay mar uun ku xaqiijisay inay dhadhamin doonto, iwm
Ma jiraan wax ka fiican inaad siiso hadiyadda ugu fiican lamaanaha. Sidaa darteed, dhammaan dadaalladii la sameeyay si loo hubiyo in markii la furayo hadiyadda ay dhoola caddeynayso qanacsanaanta ay si fiican uqalmo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Sida loogu doorto hadiyad gaar ah lamaanahaaga